Jernoobil: Qarixii ka Dhacau 25 sannadood hortood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
MAAMMULKII MOOSKVA OO CAAD SAARAY
Jernoobil: Qarixii ka Dhacau 25 sannadood hortood
Uppdaterat tisdag 26 april 2011 kl 18.50
Publicerat tisdag 26 april 2011 kl 10.33
25 sannadood dabadeed qaraxii Jernoobil
25 sannadood kadib xaruntii kortoolka howlahii warshadda. Sawirle: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix
25 sannadood ayaa laga joogaa kolii uu qaraxu ka dhacay warshaddii quwadda nuclearka ee magaalada Jernoobil 26-kii bishii abriil sannadkii 1986. Daruur wadata shucaaca macdanta aidhiomka iyo ceciumka oo roob la socday ayaa soo gaadhay qaybo ka mid ah hawada carriga Iswiidhen qaraxaasi ka dib.
- Ma ogsooni inta suntaa ku maqan saddexdayda caruur, baradhada ayaa laga helay tiro ka badan boqolkiiba, intii hore loo sheegay. Aakhirka laba garan maayo cid la aamino.
Welwelka ayaa aad u sareeyay, iminkana waxay culimadu ogaan karaan dhibaatooyinkii dadka ka soo gaaray xoolaha la cuno iyo kuwa duur-joogta ee weli oogadooda ey ku jiraan macdanta cecium ee ka sarreeysa xadkii la ogolaa in hilibkooda la suuq-geeyo. Marka laga hadlayo bani’aadamka, sidoo kale kummaan ey ka mid ahaayeen shaqaalihii dab-demiska ee carigaa sunta ka nadiifinayay.
134 ka mid ahaa shaqaalahaasi ayaa daryeel caafimaad dartii cusbitallada loo dhigay. Halka 28 ka mid ahina u dhinteen iimihii ka soo gaaray sannadkii ugu horeeyay.
Sidoo kale dhallaanka iyo dhallinyaradii deggenaa carriga suntu gaartay ayey dhibaatooyin ka soo gaareen. Iyadoona 6 000 oo ka mid ahina laga helay cudurka kaankarada ee qanjirrada. Eva Forsell Aronsson waa caalimad ka howl-gasha laanta radio-fisiika ee jaamicadda Gothrnburg.
- Waa tiro ka badan inta la filayay, marka loo barbar dhigo aqoonta loo lahaa, waana mid lagu guuleeystay in qaar badan laga daweeyo cudurradii, halka 20 ka mid ah u geeriyoodeen burooyinkii qanjirrada.
Qaraxii Jernoobil ayaa u sabab noqday tiro intaa ka badan ee cudurka kaankarada, hase yeeshee aanay muuqan tira-koob in tiradu kor u soo kaceeyso. Halka shacbigii degenaa agagaarka warshadda qaraxu ka dhacay ey ku dhaceen cudurro kale ee la xiriira wadnaha, xididdada, kelyaha, dhibaatooyin maskixiyan ah iyo salcaan ama niyad jab.
- Middaasi maaha dhibaatooyin shucaaca suntaasi la timid ee waa cabsi iyo wel-wel laga qabo iyo sidoo kale xiriirkii bulshadii carigaasi ku dhaqneeyd oo go’day. Waxaa dhici karta in ruuxii goob kale loo wareejiyay uuna go’ay xiriirkii qarabadii iyo asxaabtiisa uu la lahaa.
Waxaana isna sidoo kale qaba in caqabada welwelku ka badan yihiin kuwa shucaaca sunta qudheeda Leif Moberg, kana howl-gala hayadda ka badbaadinta shucaaca.
- Waa baaritaanno lagu sameeyay saddexda dal ee dhibaatada ugu balaarani ka soo gaartay qaraxii warshaddaasi, halkaasina ay ka muuqatay is-bedelka bulshada ku dhacay. 300 000 oo ruux ayaa la raray. Waxaa la sheegay in la dejiyay goobo ay suntu wasakheeysay, iyadoona qaar badan oo ka mid ahina sugayeen kana welwelsanaayeen iney xanuunsadaan. Guud ahaanna waa arrimmo dhaliyay welwel iyo cudurro.
Vid Fukushima görs nya mätningar dagligen och utrymningszonen har utvidgats. Forkarna kan ännu inte
Qaraxii ka dhacay magaalada Fukushima ee dalka Jabaan ayaa maalin walba cabir lagu hayaa, iyadoona la ballaarinayo goobaha aan la degi karin. Culimaduna ma sheegi karto hadda caqabadaha uu qaraxaasi la iman doono mustaqbalka. Waana mid qiyaas un ay culimadu sameeyaan, sida uu sheegay Leif Moberg.
- Mustaqbalka fog waa in sawir ka wanaagsan laga helaa heerka macdanta cecium-ka ee dhulka yaala, waana middaa howsha u baahan doonta nadiifinta, dadka oo laga raro goobahaa, muddada ay ooli doonto iyo wixii la mid ah. Sanooyin badan ayeyna qaadan doontaa kolka la ogaado dhibaatooyinka uu qaraxa warshadda Fokushima la yimid.
Maanta waxaa hoos u dhacay shucaacii sunta ee ku jiray boqoshaaga, hase yeeshee Gun Jansson oo ku dhaqan Furuvik, oo in yar dusha ka xigta degmada Gävle, ayaa sheegtay in dareenkeedu xasaasi ku yahay mar walba oo boqoshaa ama miro bannaanka laga soo guranayo.
-May, nooma aaney suurtagelin –waa mid aan suurtagal ahayn! Wax yaroo miro ah ayaan deeyrkayaga ka guranay, hase yeeshee wixii boqoshaa ama miro ah waxaan ka guranaa meelo kale oo anay caqabaddaasi soo gaarin, sida ay sheegtay.